FAALLO: Dhacdadii Bariire lama dhihi karo shil, bal waa shirqool – Warfaafiye:
FAALLO: Dhacdadii Bariire lama dhihi karo shil, bal waa shirqool
Ali Mohyadin Aug 27, 2017 0
Tacadigii Bariire waxay aheyd Khatar xambaarsan fariin ah kala daadsanaanta howlaha amaanka ku aadan badbaadinta Ummada Soomaaliyeed. Mudo dheer oo taariikh leh lama haayo siyaasad ku aadan badbaadinta iyo amaan gelinta qofka Soomaaliga ah ee dalka gudahiisa.
Dagaaladii sokeeye, waxaa meesha ka baxay xormada nafta aadamiga ah, maamuladii KMG ahna waxay tacadiyo badan ka geysteen xuquuqda dadka muwaadiniinta ah. maamul ku sheegii Mbaghati waxay madiidin u noqdeen ciidamo shisheeye ah, Itoobiyaankii shacbiga Soomaaliyeed ku xasuuqay dalka gudahiisa, taasoo noqotay taariikh lama ilaawaan ah.
Dowladihii rasmiga ah ee tii Xasan Sheekh iyo mida hadda joogto, weli kuma aysan guuleysan in la tixgeliyo sharafta iyo muwaadinka Soomaaliyeed.
Ciidamada shisheeye ee Somalia ku sugan, dil bareer ah iyo shilba waxay geystaan dib looma eego. Kuwa lagu tilmaamay ciidamada amaanka qaranka, askar iyo saraakiilba waxaa ka mid ah mooryaantii iyo gacan ku dhiiglayaal badan oo dhiig daadshay mudadii dagaaladii sokeeye.
Mida ka dhacday Bariire, ma ahan midii ugu horeysay, bal todobaadyadii ugu danbeeyay xataa waxaa Jilib lagu xasuuqay dad isku qoys ah oo aan waxba galabsan.
Soomaalida waxay noqdeen dhibane iyo aadami looma ooyaan ah. Dowladda Farmaajo waxqabadkeeda amaanka ah, waxay kusoo aruurtay dacaayado iyo been abuur ah, dhab ahaantii ah mid lagu dedaayo waxqabad la’aan iyo xirfad la’aanta haysata dadka madaxda ka ah howlgalada ciidamada.
Sambaloolshe wuxuu ugu horeeyaa taliyeyaasha turaanturada iyo guuldarada ku ah howlaha amaanka ee qaranka, aqoon la’aantiisa adeegyada amniga waxay u horseeday inuu kala saari waayay caddowga iyo muwaadiniinta ku hoos nool deegaanada ay xukumaan.
Arintii ka dhacday Bariire lama dhihi karo shil, bal waa shirqool. Dowladdii wey kala hadashay, iska war qab la’aan dhexdooda ah iyo xuuraanka NISA oo aan dowladda u fududeyn warsiin dhab ah.
Madaxweynihii iyo xukuumaddiisa siyaabo kala duwan oo khalad ah, sharaf dhacna ah ayey ugu hadleen dhacdadii Bariire, waxaa la xasuuqay shacab rayid ah, maatina ah, dowladdiina si jees jees ah iyo faan ayey ku tilmaamtay dadkii la laayay inay ahaayeen Shabaab iyo Argagixiso, shacbigii nawaaxiga Afgooye iyo Bariire iyo qeybo kaloo ka mid ah dalka waxay ka muujiyeen arrintaasi gadood iyo iyagoo dowladda ku tilmaamay mid aan mas’uuliyad iyo damaanad laheyn.
Meydadkii marxuumiinta oo isugu jiray dad waayeel ah, haween iyo caruur ilaa hadda lama aasin, sababtoo ah iyadoo dowladda ku guuldareysatay inay bannaanka soo dhigto canaasiirtii ku fadeexoowday xasuuqaaasi.
Nasiibdarada ugu weyn jirta waxaa waaye, ciidamada gudahooda ayaa waxaa laga dhex heli karaa saraakiil howlgalada u adeegsada aargoosi qabiil iyo isbaarooyin aan qaban mujtamaca la nool xaalada wadanka.
Farmaajo iyo xubnahiisa dowladda horaa loogu tilmaamay fudeyd, fudeydkaas ayaa wax walba ugu dhigay fidno ee lugaha lasii gelayaan, waayo aragnimo la’aan iyo aqoondaro xagga xirfadaha maamul ey dalka ku xukumayaan.
Dhacdadii Bariire haddii ay sii socoto noocyada dhacdadii Barrire oo kale ama kuwo kale oo meelo kala duwan ee dalka ka dhacay waxay horseedi karaan argagixisada caddowga ah inay soo jiitaan shacbiga u baahan inay dowlad caadil ah helaan, taasoo ah sawirka dhabta ah ee mushkilada amaanka khatarta ku ah jiritaanka qaranimada Soomaaliyeed.
Talada maanta taal waxay tahay dowladda iyo howlaheeda amaanka qaranka in istiraatiijada iyo siyaasadda ku saabsan badbaadada shacbiga meel kasta ay dalka ka joogaan in laga soo saaro shuruuc iyo go’aamo cad cad ee kafaalo qaad u noqon kara nolosha, daryeelka iyo amaanka muwaadinka Soomaaliyeed.